यौनसम्पर्क गर्दा कुन रोगमा फाइदा हुन्छ त ? - Everest Dainik - News from Nepal
यौनसम्पर्क गर्दा कुन रोगमा फाइदा हुन्छ त ?
याे पनि पढ्नुस सेक्स गर्दा कण्डम फुटे के गर्ने ?
याे पनि पढ्नुस यी हुन याैन सम्बन्धका १० गुरुमन्त्र
♦मोटोपनबाट:मोटोपनबाट समस्यामा परेकाहरुलाई पनि नियमित सेक्स राम्रो मानिएको छ । कुनै पनि कसरत गर्नु भन्दा नियमित सेक्स मोटोपन घटाउन सहजसिद्ध हुने शोधकर्ताहरुको भनाइ छ ।ह